‘टप ५’ बाट किन एकैछिनमा हटाइयो श्रृंखलालाई ? – Rastriyapatrika
‘टप ५’ बाट किन एकैछिनमा हटाइयो श्रृंखलालाई ?
काठमाडौं । चीनको आयोजनामा पर्यटकीय सहर सान्यामा शनिवार सम्पन्न मिस वर्ल्ड २०१८ को उपाधि मेक्सिकोले जितेको छ। अन्तिम ५ मा छानिएका थाइल्याण्ड, युगाण्डा, मेक्सिको, बेलारुस र जमैका मध्ये निर्णायक मण्डलको मन जित्दै मेक्सिकोकी सुन्दरी भेनेसा देलिओनले मिस वर्ल्ड २०१८ को ताज पहिरिएकी हुन्।
१३ जना निर्णायकले अन्तिम ५ प्रतिस्पर्धीमध्यबाट उपाधि विजेता घोषणा गरेका थिए। युगाण्डाले मेक्सिको तथा थाइल्याण्डले सबैभन्दा बढी पब्लिक भोट पाएका थिए। त्यस्तै थाइल्याण्डकी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप हुन सफल भइन्।
नेपालकी शृङ्खला खतिवडाले यसपटक उपाधी कब्जा गर्छिन् भन्ने धेरैलाई आशा थियो। उनले प्रतियोगितामा सुरु देखि देखाएको प्रस्तुतीले उनी दाबेदारको रुपमा हेरिएको थिइन् । तर, टप ३० बाट उनको यात्रा टप १२ मै सिमित रहन पुग्यो।
पाँच महादेशबाट टप १२ छानिएका मध्येबाट हरेक महादेशको विजेता घोषणा गर्दा टप ५ छनोट गरिँदा एसिया क्षेत्रबाट थाइल्याण्डकी सुन्दरी छानिएकी थिइन्।
मिस वल्र्ड जस्तो गरिमामय संसारको प्रतिष्ठित कार्यक्रममा भएको गतिविधि अपडेट गर्ने मिस वल्र्डको आधिकारिक भेरिफाइड पेजमा भने टप ५ मा नेपालको नाम देखाइएको थियो।